အမျိုးသားရေးလမ်းစဉ် အပိုင်း ၂ အမြိုးသားရေးလမျးစဉျ အပိုငျး ၂ – Federal Journal
အမျိုးသားရေးလမ်းစဉ် အပိုင်း ၂ အမြိုးသားရေးလမျးစဉျ အပိုငျး ၂
၁။ ပှညထှောငစှုမှနမှာနိငငှံကိုတညဆှောကရှာတှငှ အခှခေံရမညှ့ အဓိကအခှခေံမူမှာ ပငလှုံကတိကဝတှ၊ပငလှုံစာခှုပပှငဖှှဈသညှ။တဈနညှးအားဖှငှ့ပငလှုံမူဖှဈသညှ။
၂။ ပငလှုံကတိကဝတှ၊ပငလှုံစာခှုပပှါသဘောတူညီခကှမှှားသညှ တိုငပှှညပှှုလှှတတှောပှထမညီလာခံတှငှ (၁၆. ၆. ၁၉၄၇) ရကနှေ့၌ ဗိုလခှှုပအှောငဆှနှးတငသှှငှးခဲ့သော ဖှဲ့စညှးအုပခှှုပပှုံအခှခေံဥပဒေ လမှးညှှနအှဆို (၇) ခကှထှကပှို၍ ပှညှ့စုံခိုငမှာသညှ။
၃။ လမှးညှှနအှဆို (၇) ခကှတှှငှ ပငလှုံကတိကဝတနှှငှ့ ပငလှုံစာခှုပပှါသဘောတူခကှမှှား၌
ရညရှှယထှားသညှ့ ”ပှညထှောငစှုဝငပှှညနှယှ၊ကိုယပှိုငအှုပခှှုပခှှငှ့ရပှညနှယှ၊လူမှိုးစုပှညနှယမှှား” ဟု ထညှ့သှငှးဖေါပှှထားခှငှးမရှိပဲ ”တသီးပုဂလပှညနှယဓှ ဟုသာ ယဘေုယဖှောပှှထားသညှ။
ထို့အတူ ”တိုငှးရငှးသား” ဟုမသုံးပဲ ”လူနညှးစု” ဟုသာ ယဘေုယှ သုံးစှဲထားသညှ။
ထို့အပှငှ ‘အမှိုးသားတနှးတူရေး’ ”၊ပှညနှယမှှား၏အခှုပအှခှာအာဏာ” ”ပှညနှယအှာဏာနှငှ့ပှညထှောငစှုအာဏာခှဲဝမှေု”
ဤအခကှမှှားကိုထောကရှှုလငှှ အဆိုရှငှ ဗိုလခှှုပအှောငဆှနှးကိုယတှိုငကှ ပငလှုံမူကို တမငပှုံဖကှခှဲ့သလား၊ (သို့တညှးမဟုတှ ) ညီလာခံမှာဆှေးနှေးခှငှးမပှုနိငရှနှ တမငခှနှလှှပပှှီး ဥပဒပညောရှငှ ဦးခနှထှှနှးအားလိုအပသှလိုစိတကှှိုကှ ပုံဖေါရှေးဆှဲစခေဲ့ခှငှးဖှဈသလား၊ ဆိုသညကှို သုတသေီမှားဆကလှကဆှနှးစဈရနလှိုအပပှါသညှ။
ယခုအခှိနအှခါတှငလှညှး အငစှီအေ ပါ အခှို့စာပိုဒမှှားတှငှ ပါရှိသောအသုံးအနှုနှးမှားကို အာဏာလကရှှိသူမှားက လိုရာဆှဲပှီး အဓိပပွါယဖှှငှ့ဆိုမှုမှားကှောငှ့ အငှငှးပှါးမှုကှီးလာကာ ငှီမှးခမှှးရေးဆှေးနှေးပှဲဖှဈစဉမှှား နှောငှ့နှေးလာရပှနပှှီဖှဈသညှ။
၄။ မညသှို့ပငဆှိုစေ၊ လမှးညှှနအှဆို (၇)ခကှတှှငှ ပငလှုံကတိကဝတှ၊ပငလှုံသဘောတူခကှအှခှို့ကို ထိနခှနှထှားပှီး၊ ဖကဒှရယပှှညထှောငစှုတညဆှောကရှေး ပငလှုံမူမှ သှဖေီခဲ့ကှောငှးအထငအှရှားတှေ့ရသညှ။
၅။ အကှိးဆကအှားဖှငှ့ ၁၉၄၇ခုနှဈဖှဲ့စညှးအုပခှှုပပှုံအခှခေံဥပဒသညှေ ဖကဒှရယပှှညထှောငစှုကို တညဆှောကခှှငှးမဟုတပှဲ
ဗမာလူမှိုးကှီးက ကနှတှိုငှးရငှးသားအပေါလှှှမှးမိုးခှုပကှိုငှ သညှ့ တဈပှညထှောငစှနဈကို ပုံဖောခှဲ့ခှငှးဖှဈရာ၊ ပှညတှှငှးစဈမှေးဖှါးပေးခဲ့ပှီး နိငငှံတောအှားနာတာရှညရှောဂါ သညဖှှဈစသညကှေိုသမိုငှးသငခှနှးစာရကှပှီးဖှဈသညှ။
၆။ ဤသငခှနှးစာအရ နိငငှံတောကှိုဖကဒှရယပှှညထှောငစှုအဖှဈတညဆှောကရှနမှဖှဈမနလေိုအပနှပှေီး၊
ဤသို့တညဆှောကရှာတှငှ တိုငှးရငှးသားမှားအနဖှငှေ့ ဗမာတိုငှးရငှးသားခေါငှးဆောငမှှားပေးသောကတိကဝတမှှားကို ယခငကှကဲ့သို့ယုံကှညပှုံအပှ၍မရတော့ပဲ မိမိတို့အမှိုးုသားရေးအငအှားကှီးထှားတောငှ့တငှးလာအောငှ
၇။ လူမှိုးပေါငှးစုံနထေိုငသှောနိငငှံမှိုးတှငှ ပါတီတဈခုတညှးက အပှတအှသတအှနိငရှခဲ့လငှှ တိုငှးရငှးသားလူနညှးစုအတှကှ
အလှနအှနတွရယကှှီးပါသညှ။ အပှနအှလှနထှိနှးကှောငှးမညှ့ အားကောငှးသညှ့ပါတီမရှိခှငှးကှောငှ့ ခတှအဆကေဆှကတှှငှ
၈။ ၁၉၄၈-၁၉၅၈ခုနှဈကာလတှငှ ဖဆပလပါတီ၊၁၉၇၄-၁၉၈၈ခုနှဈကာလတှငှ မဆလပါတီ၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ခုနှဈကာလတှငှ ပှညခှိုငဖှှိုးပါတီ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၉။၂၀ခုနှဈကာလတှငှ အငအှယလှဒှီပါတီက အပှတအှသတအှနိငရှသညှ့အတှကှ ဖကဒှရယပှှညထှောငစှု တညဆှောကရှေးမှာ ပို၍ပို၍အလှမှးဝေးခဲ့ရသညမှှာယနေ့အထိဖှဈသညှ။
၉။ ထိုသို့အပှတအှသတအှနိငရှရှိရေးအတှကကှူညီထောကပှံ့ခဲ့သူမှားမှာ တိုငှးရငှးသားလူနညှးမှားပငဖှှဈသညကှို စိတမှကောငှးစရာတှေ့ရပါသညှ။
၁၀။ ခတှအဆကေဆှကှ တိုငှးရငှးသားပါတီမှားအားနညှးခဲ့ခှငှးကှောငှ့ ဗမာဦးဆောငသှောပါတီမှားကို အပှနအှလှနမှထိနှးကှောငှးနိငပှဲ တိုငှးရငှးသားလူနညှးစုမှား၏ရပိုငခှှငှ့မှား၊ဘာသာရေးလှပလှပခှှငှ့မှား လကလှှတဆှုံးရှုံးခဲ့ရသညကှိုသငခှနှးစာယူသငှ့ပှီဖှဈသညှ။
၁၁။ ထို့ကှောငှ့ ခငှှးတိုငှးရငှးသားမှားအပါအဝငှ တိုငှးရငှးသားလူနညှးစုမှားအနဖှငှေ့ ပှညနှယလှှှတတှောှ၊
၊ပှညထှောငစှုလှှတတှောှ တို့တှငှ မိမိတို့လူမှိုးပါတီ၊အမှိုးသားရေးပါတီမှား
အငအှားကောငှးပှီး အပှနအှလှနထှိနှးကှောငှးနိငရှေးအတှကှ အားပေးထောကခှံခှငှး၊မဲပေးခှငှးဖှငှ့ ကူညီမှသာလငှှ လဈလှုရှုခံရခှငှး၊မကှကှှယပှှုခံရခှငှး၊ ပဈပယခှံရခှငှး၊ ဖိနှိပခှှဲခှားဆကဆှံခံရခှငှး၊ စိုးမိုးခယှလှှယခှံရခှငှးမှ လှတမှှောကနှိငမှညဖှှဈသညှ။ ။
၁။ ပှညထြောငစြုမှနမြာနိငငြံကိုတညဆြောကရြာတှငြ အခှခေံရမညြ့ အဓိကအခှခေံမူမှာ ပငလြုံကတိကဝတြ၊ပငလြုံစာခွုပပြငဖြှဈသညြ။တဈနညြးအားဖှငြ့ပငလြုံမူဖှဈသညြ။
၂။ ပငလြုံကတိကဝတြ၊ပငလြုံစာခွုပပြါသဘောတူညီခကွမြွားသညြ တိုငပြှညပြှုလှှတတြောပြထမညီလာခံတှငြ (၁၆. ၆. ၁၉၄၇) ရကနြေ့၌ ဗိုလခြွုပအြောငဆြနြးတငသြှငြးခဲ့သော
လမြးညှှနအြဆို (၇) ခကွထြကပြို၍ ပှညြ့စုံခိုငမြာသညြ။
၃။ လမြးညှှနအြဆို (၇) ခကွတြှငြ ပငလြုံကတိကဝတနြှငြ့ ပငလြုံစာခွုပပြါသဘောတူခကွမြွား၌
ဟု ထညြ့သှငြးဖေါပြှထားခှငြးမရှိပဲ “တသီးပုဂလပှညနြယြ” ဟုသာ ယဘေုယဖွောပြှထားသညြ။
“တိုငြးရငြးသား” ဟုမသုံးပဲ “လူနညြးစု” ဟုသာ ယဘေုယွ သုံးစှဲထားသညြ။
ဤအခကွမြွားကိုထောကရြှုလငွြ အဆိုရှငြ ဗိုလခြွုပအြောငဆြနြးကိုယတြိုငကြ ပငလြုံမူကို တမငပြုံဖကွခြဲ့သလား? (သို့တညြးမဟုတြ )ညီလာခံမှာဆှေးနှေးခှငြးမပှုနိငရြနြ တမငခြနွလြှပပြှီး ဥပဒပညောရှငြ ဦးခနွထြှနြးအားလိုအပသြလိုစိတကြှိုကြ ပုံဖေါြြရြေးဆှဲစခေဲ့ခှငြးဖှဈသလား? ဆိုသညကြို
ယခုအခွိနအြခါတှငလြညြး အငစြီအေ ပါ အခွို့စာပိုဒမြွားတှငြ ပါရှိသောအသုံးအနှုနြးမွားကို
၄။ မညသြို့ပငဆြိုစေ၊ လမြးညှှနအြဆို (၇)ခကွတြှငြ ပငလြုံကတိကဝတြ၊ပငလြုံသဘောတူခကွအြခွို့ကို ထိနခြနွထြားပှီး၊ ဖကဒြရယပြှညထြောငစြုတညဆြောကရြေး ပငလြုံမူမှ သှဖေီခဲ့ကှောငြးအထငအြရှားတှေ့ရသညြ။
၅။ အကွိးဆကအြားဖှငြ့ ၁၉၄၇ခုနှဈဖှဲ့စညြးအုပခြွုပပြုံအခှခေံဥပဒသညြေ ဖကဒြရယပြှညထြောငစြုကို တညဆြောကခြှငြးမဟုတပြဲ
သညြ့ တဈပှညထြောငစြနဈကို ပုံဖောခြဲ့ခှငြးဖှဈရာ၊
၆။ ဤသငခြနြးစာအရ နိငငြံတောကြို
ဤသို့တညဆြောကရြာတှငြ တိုငြးရငြးသားမွားအနဖှငြေ့ ဗမာတိုငြးရငြးသားခေါငြးဆောငမြွားပေးသောကတိကဝတမြွားကို ယခငကြကဲ့သို့ယုံကှညပြုံအပြ၍မရတော့ပဲ မိမိတို့အမွိုးုသားရေးအငအြားကှီးထှားတောငြ့တငြးလာအောငြ
၇။ လူမွိုးပေါငြးစုံနထေိုငသြောနိငငြံမွိုးတှငြ ပါတီတဈခုတညြးက
၈။ ၁၉၄၈-၁၉၅၈ခုနှဈကာလတှငြ ဖဆပလပါတီ၊၁၉၇၄-၁၉၈၈ခုနှဈကာလတှငြ မဆလပါတီ၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၅ခုနှဈကာလတှငြ ပှညခြိုငဖြှိုးပါတီ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၉/၂၀ခုနှဈကာလတှငြ အငအြယလြဒြီပါတီ
က အပှတအြသတအြနိငရြသညြ့အတှကြ ဖကဒြရယပြှညထြောငစြု တညဆြောကရြေးမှာ ပို၍ပို၍အလှမြး
မှာ တိုငြးရငြးသားလူနညြးမွားပငဖြှဈသညကြို စိတမြကောငြးစရာတှေ့ရပါသညြ။
၁၀။ ခတြအေဆကဆြကြ တိုငြးရငြးသားပါတီမွားအားနညြးခဲ့ခှငြးကှောငြ့ ဗမာဦးဆောငသြောပါတီမွားကို အပှနအြလှနမြထိနြးကွောငြးနိငပြဲ တိုငြးရငြးသားလူနညြးစုမွား၏ရပိုငခြှငြ့မွား၊ဘာသာရေးလှပလြပခြှငြ့မွား လကလြှတဆြုံးရှုံးခဲ့ရသညကြိုသငခြနြးစာယူသငြ့ပှီဖှဈသညြ။
၁၁။ ထို့ကှောငြ့ ခငွြးတိုငြးရငြးသားမွားအပါအဝငြ
အငအြားကောငြးပှီး အပှနအြလှနထြိနြးကွောငြးနိငရြေးအတှကြ အားပေးထောကခြံခှငြး၊မဲပေးခှငြးဖှငြ့ ကူညီမှသာလငွြ လဈလွုရှုခံရခှငြး၊မကွကြှယပြှုခံရခှငြး၊ ပဈပယခြံရခှငြး၊
ဖိနှိပခြှဲခှားဆကဆြံခံရခှငြး၊စိုးမိုးခယွလြှယခြံရခှငြးမှ လှတမြှောကနြိငမြညဖြှဈသညြ။ ။